Eritrea oo Qatar ku eedeysey Afgembi in ay la damacsan tahay - Awdinle Online
Eritrea oo Qatar ku eedeysey Afgembi in ay la damacsan tahay
November 28, 2019 (Awdinle Online) – Wasaaradda Warfaafinta Dowladda Eritrea ayaa war-saxaafadeed qoraal ah oo ay soo saartey ku sheegtey in Dowladda Qatar ay dhibaatooyin waaweyn ay ka wado dalkeeda.
War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegey in Dowladda Qatar ay ka shaqeyneyso abaabul kicin ah oo ay ku dooneyso in la dumiyo Dowladda Madaxweyne Asaias Afwerki.
“Dowladda Eritrea ayaa ku eedeysay dowladda Qatar inay u abuureyso falal cadaawad ah, sida inay ku kiciso dhalinyarada, kacdoon ay sameeyaan dadka Muslimiinta xubno ka mid ahna tababareyso miinooyinka, dilalka qorsheysan oo lagu ugaarsado saraakiisha Eritrean-ka iyo weerarada gaadmada ah.
Hadda ayay Madaxweyne Farmaajo waajib ku tahay inuu dhex dhexaadiyo Eritrea iyo Qatar, maadaama labadaas dal ay labadiisa garab yihiin”.
Dowladda Qatar ayaa badanaaba lagu eedeeyaa falalka dhibaatooyinka ah ee ka jira dalal qaar.
Previous articleEritrea accuses State Qatar to planning a Coup.
Next articleDowladda Sudan oo Baabi’isey Xisbigii Golaha Qaranka ee Cumar Al-Bashiir